nomoto rotator - China Langzhi Welding Equipment
nomoto rotator Welding rotator ndiye mubatsiri zvokushandisa Welding kushandiswa. Kuti tiwane kodzero nzvimbo Via tilting uye revolving.Uesd pamwe achifurira uye ndiri weredha, sezvo otomatiki nomoto centre kana sezvo workpiece rotator apo Chinyorwa welding.We dzinotevedzera VFD sezvo nokukurumidza kudzora iro rine yakakwirira accurancy .control bhokisi inogona kusvika nangananga inokuvadza kure kana linkage kushanda apo inowanikwa pamwe achifurira uye ndiri weredha. Welding rotator ine rakarereka mudziyo uye dzitendererane device.To kuwana zvaida nomoto kana ...
Welding rotator ndiye mubatsiri zvokushandisa Welding kushandiswa. Kuti tiwane kodzero nzvimbo Via tilting uye revolving.Uesd pamwe achifurira uye ndiri weredha, sezvo otomatiki nomoto centre kana sezvo workpiece rotator apo Chinyorwa welding.We dzinotevedzera VFD sezvo nokukurumidza kudzora iro rine yakakwirira accurancy .control bhokisi inogona kusvika nangananga inokuvadza kure kana linkage kushanda apo inowanikwa pamwe achifurira uye ndiri weredha.
Welding rotator ine rakarereka mudziyo uye dzitendererane device.To kuwana zvaida nomoto kana assemblying angled Via pachikuva kusimuka. Platform havukavu kuzvidzora ndiye VFD inotungamira kuti kugutsikana nomoto speed.Customize inowanikwa maererano nezvaidiwa wako.
Previous: nomoto wekushanduka chinotenderera
Next: unobatanidza Machine